83 okushiwo abanye
Entre-Deux, Saint Pierre, i-Réunion
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Steven
I-Ti Kaz Perchée iyiqhugwane elakhiwe esitshalweni esikhulu se-lychee lapho isiqu saso siwela khona igumbi lokuphumula futhi siyaqhubeka sikhula ngezindonga zamakamelo okulala. Ikhabhinethi itholakala ngamamitha angu-06 ngaphezu komhlaba ngokuphepha okuphelele, ikunikeza ngaphezu kokunethezeka kwayo, umbono omangalisayo we-Entre-Deux nezintaba zayo.
I-Ti Kaz Perchée iyindawo yokuhlala eyingqayizivele futhi engavamile ngoba akuzona zonke izinsuku zokuphila kwakho ukuthi ungahlala ekhabetheni elibekwe esihlahleni. Futhi ngaphezu kokunethezeka kwayo, inikeza umbono omuhle kakhulu wezintaba ze-Entre-Deux
Bonisa wonke amasevisi angu- 26
4.81 ·83 okushiwo abanye
4.81 · 83 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-83
I-Ti Kaz Perchée yindlu eyakhiwe esitshalweni se-lychee etholakala ngamamitha angu-06 ngaphezu komhlaba ngokuphepha okuphelele, ikunikeza ngaphezu kokunethezeka kwayo, umbono ophelele futhi omangalisayo we-Entre-Deux nezintaba zayo.
I-Ti Kaz Perchée iyindawo eqashisayo yesizini engajwayelekile etholakala edolobheni elihle lase-Entre-Deux, elungele abathandi bemvelo, imindeni, abasubathi kanye nabantu abafuna ukuthula.
I-Ti Kaz Perchée itholakala imizuzu engu-15 ukuhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha nemizuzu emi-5 ukusuka ezindleleni ezimbili zokuhamba izintaba, futhi ngaphansi kwemizuzu engama-20 ukusuka eSaint Pierre ngemoto, elungele ukuhlanganisa intaba nolwandle.
Masikwamukele ngomoya wokungenisa izihambi nangobungane endaweni yethu encane emangalisayo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$168.
Hlola ezinye izinketho ezise- Entre-Deux namaphethelo
Canton de Saint-Louis-2